जानुका धमला | Ratopati
बुधबार १९ मङ्सिर, २०७५ Monday, 12 April, 2021
नैनबहादुरको फर्किएको खुशी access_timeसाउन १९, २०७७
माओवादी जनयुद्धका बेला द्वन्द्वपीडित भएका धेरैका हृदयविदारक कथा र व्यथाहरु छन् । तीमध्ये केही प्रकाशमा आएका छन् भने अझै धेरैको व्यथा कतै दर्ता भएको छैन । त्यसरी कतै दर्ता समेत नभएका र सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा नपाएका र प्रक्रिया पनि केही नभएकाहरुको संख्या थ...
कयौं युद्ध जिताएका यी कमाण्डर आफ्नै जीवनसँग यसरी हार्ने अवस्थामा पुग्नु नै गणतन्त्र ? access_timeसाउन १२, २०७७
मृत्युसँग डराउने उनी कायर होइनन् । मृत्युसँग डराउँथे भने उनले जनयुद्धमा साहसपूर्वक त्यत्रा युद्ध लड्दैनथे होला । युद्ध लडेको मात्र होइन, उनी कहिल्यै हारेनन् । अफसोच ! अहिले जीवनसँग हार्दैछन् । मृत्यु अवश्यम्भावी छ तर यति चाँडै, यसरी जीवनसँग हार्न चाहदैनन् उनी । देशमा प...
वैशाख, बीके अपरेसन र बन्दीपुर मोर्चा access_timeबैशाख २५, २०७७
अर्ध मूर्छित अवस्थामा सुतिरहेको मेरो वीरताको विगत सम्झँदै गर्दा मनमा खुशी र विस्मातको छाल एक्कै पटक उर्लिन्छ । ऊर्जाशील जीवनका हरेक वर्षलाई नियाल्दा तीन सय ६५ दिनका त्यति नै फरक अनुभूति छन् । जनयुद्धका आँधीमय दिनका हिसाबले झन्डै आधा समय युद्ध मोर्चाहरुको अनुभव छ । कोरोन...
वैशाख १० : जनयुद्धको अन्तिम फौजी मोर्चाको सम्झना access_timeबैशाख १०, २०७७
म अहिले तेही मझेरी र आँगनमा छु । राज्यसत्ताविरुद्धको विद्रोहको युगीन पाठशाला मानिने पेरिस कम्युनको नजिकैबाट नेपालको युगीन विद्रोहको अनुभव बाँड्न पाउने भाग्यमानी हूँ आजको दिनमा म । यसैले म आज यहाँबाट माओवादी जनयुद्धको अन्तिम मोर्चा चौतारा मोर्चाको गर्त उधिनिरहेको छु...